Soo Iibso USB Laabbadaha Laptop -ka ee Hawada ee Dibedda ah - Gaadiid Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Qaboojiyaha Hawada Laptop-ka ee La Qaadan Karo
$ 21.99 qiimaha joogtada ah $ 31.99
Qaboojiyaha Hawada Laptop-ka ee La Qaadan Karo gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca shucaaca: Hawo-qabow
Cabbirka Laptop Codsiga: Dhamaan Qiyaasta Laptop-ka
Nooca: Taageerayaasha Kaliya
Qalabka: ABS + Birta
Aragti, 176 * * 86 52mm
Xawaaraha Fan: 1300-3000 ± 10% RPM
Koronto: 5V DC
Hadda: 0.4 ± 10% A
Xawaaraha ugu badan: 21.35CFM
Qalab yar oo la qaadan karo oo yar-yar oo la qaadan karo oo qaboojiye laptop ah
Qaboojin degdeg ah ugu yaraan 20 darajo.
Qaab-qaboojiyaha qaabka ciyaarta ee gaarka ah
Wareejinta xawaaraha taageeraha
Ku billow inaad isticmaasho, si aad si dhakhso leh u qaboojiso, u fur kan ugu weyn (3000 RPM), heerkulku hoos u dhaco, Qiyaastii 15 daqiiqo, loo wareejiyo ugu yar (1500 RPM) ayaa ah mid joogto ah, si aan ugu sii haysan karno heerkul shaqeynaya macquul ah, iyo sii dheereyn kara nolosha adeegga iyo buuqa hoose.
Si aad u fiican baa loo buuxiyay. Baqshaddii ayaa degdeg u timid. Aad baan ugu farxay. Wax yar buuq badan laakiin wuu sameeyaa. Dhammaantood waxaa ku jira sawirka
Kaliya aad u fiican! Ku yimid xaalad qumman, 19 maalmood gudahood waqooyiga Brazil. Shaqaynaya 100%
Waxaan u qaataa laptop labaad, aad ayaan ugu qanacsanahay. Shaqeeya. Ku garaac heerkulka 10 digrii celcelis ahaan kaarka fiidiyowga iyo processor -ka labadaba. Gaar ahaan wuxuu ka caawiyaa cayaaraha qolka diiran heerkulka 30 darajo Celsius. Laakiin tani ma joojinayso beddelidda dhejiska kuleylka iyo nadiifinta waqtigeediiba siigada.
Ku shub wixii dhibaato ah ee ku saabsan heerkulka ilaa 7 ilaa 8 digre et ça va niveau bruit je recommande
Waxay u muuqataa mid weyn, waxoogaa weyn laakiin wanaagsan, ha Waxay qaadatay wax ka yar toddobaad, weli ma aan isku dayin. Waxaan rajaynayaa inay shaqadeeda qabsato. Waxay u muuqataa inay shaqeyneyso in kastoo wax badan aysan runta qaboojin!